I-Fibromyalgia ne-Leg Cramps Isizathu, Ukuzikala, Ukwelashwa nokuzivocavoca umzimba
11 / 01 / 2021 /i fibromyalgia, rheumatism /av olimalayo
Ingabe uphethwe imilenze? Ucwaningo lukhombisile ukuthi labo abane-fibromyalgia banezigameko eziphakeme zezinhlungu zemilenze. Kulesi sihloko, sibheka ngokucophelela ukuxhumana phakathi kwe-fibromyalgia kanye ne-cramp yomlenze.
Ucwaningo luxhumanisa lokhu nohlobo lobuhlungu be-fibromyalgia obubizwa ngokuthi i-hyperalgesia (1). Siyazi futhi kusuka phambilini ukuthi ukutolikwa kobuhlungu kunamandla kulabo abathintekayo yilesi simo esibuhlungu esingapheli. Ucwaningo lokubuyekeza oluhlelekile lukhombisile ukuthi kungenzeka kungenxa yokusebenza ngokweqile kwesistimu yezinzwa kuleli qembu lesiguli (2).
Amathiphu amahle futhi asheshayo: Ngaphansi kwendatshana, ungabuka ividiyo enokuzivocavoca umzimba kobuhlungu bomlenze. Siphinde futhi sinikeze ngamathiphu ngezinyathelo zokuzikala (njenge amasokisi wokucindezela ithole og amasokisi wokucindezela we-plantar fasciitis) futhi super-magnesium. Izixhumanisi zivuleka ewindini elisha.
Yini ama-Cramp Leg?
Isixhumanisi phakathi kweFibromyalgia ne-Leg cramp
Izinyathelo zokuzikhethela ulwa nemilenze
Amajaqamba omlenze angenzeka emini nasebusuku. Okuvame kakhulu ukuthi kwenzeka ebusuku ngemuva kokulala. Amajaqamba enkonyane aholela ekunciphiseni okuqhubekayo, okungazibandakanyi futhi okubuhlungu kwemisipha yethole. I-cramp ingathinta lonke iqembu lemisipha noma izingxenye zemisipha yethole kuphela. Iziqephu zihlala emasekhondini kuya emizuzwini embalwa. Lapho uthinta imisipha ethintekayo, uzokwazi ukuzwa ukuthi ingcindezi ibuhlungu futhi ishuba kakhulu.
Ukuquleka okunjalo kungaba nezimbangela ezahlukahlukene ezahlukahlukene. Ukwehla kwamanzi emzimbeni, ukuntuleka kwama-electrolyte (kufaka phakathi i-magnesium), imisipha yenkonyane engasebenzi ngokweqile nezinzwa ezingasebenzi kahle (njenge-fibromyalgia) kanye nokuncinzwa kwemizwa ngemuva yizo zonke izimbangela ezingaba khona. Ukuba nenqubo yokwelula imisipha yethole ngaphambi kokulala kungasiza ekunciphiseni izehlakalo. Ezinye izinyathelo ezifana ne- kokucindezelwa amasokisi futhi kungaba yisilinganiso esisebenzisekayo sokwengeza ukujikeleza kwegazi endaweni - futhi ngaleyo ndlela kusize ukuvikela ukuquleka (isixhumanisi sivuleka ewindini elisha).
Esethulweni sendatshana, sivumelene ukuthi izifundo ziveze ukungasebenzi kakhulu ohlelweni lwezinzwa kulabo abathintekayo yi-fibromyalgia (1, 2). Ngokuqondile, lokhu kusho ukuthi uhlelo lwe-peripheral nervous luthumela amasiginali amaningi futhi anamandla kakhulu - okuholela ekuthini kube namandla okuphumula aphezulu (inani lomsebenzi wezinzwa) futhi ngaleyo ndlela ngokuqina okugcina kudlikizele. Ngenxa yokuthi kubonakele nokuthi isikhungo sokuhumusha izinhlungu ku- ubuchopho abunazo «izihlungi zobuhlungu», kulabo abane-fibromyalgia, ukuqina kobuhlungu nakho kuyakhuliswa.
- Amajaqamba emilenze Ngenxa yezimpawu zamaphutha?
Kukholakala futhi ukuthi uhlelo lwezinzwa oludlulele kulabo abane-fibromyalgia lungaholela kwizimpawu zamaphutha emisipheni, okungaholela ekunciphiseni okungazibandakanyi nasekucingeni.
Ukuxhumana phakathi kwamagundane omlenze neFibromyalgia
Isistimu Yezinzwa Esebenza ngokweqile
Ukukhuphuka Kokuvuvukala Kwezicubu Ezithambile
Labo abane-fibromyalgia ngakho-ke banokwanda kokusebenza kwemisipha, kanye nohlelo lwe-peripheral 'hyperactive'. Lokhu kuholela ekuqaqanjelweni imisipha kanye nasezinyameni. Uma sibhekisisa ezinye izimo ezihambisana ne-fibromyalgia - njenge i-bowel syndrome - lapho-ke siyabona ukuthi lokhu futhi kuyindlela yokuphamba kwemisipha, kepha kulokhu imayelana imisipha ebushelelezi. Lolu wuhlobo lwemisipha oluhlukile emisipheni yamathambo, njengoba lokhu sikuthola ikakhulukazi ezithweni zomzimba zamathumbu (njengamathumbu). Ukusebenza ngokweqile kulolu hlobo lwe-fibre yemisipha, njengemisipha emilenzeni, kungaholela ekuphambaneni okungazibandakanyi nasekucasukeni.
Eyodwa ene-fibromyalgia idinga ukwanda kokujikeleza kwegazi ukugcina ukusebenza kwemisipha okujwayelekile emilenzeni. Lokhu kungenxa yokuthi umsebenzi omkhulu wemisipha ubeka izidingo eziphakeme ekunikezelweni kwama-electrolyte egazini - njenge-magnesium (funda kabanzi nge-super-magnesium wakhe) ne-calcium. Eziningana ngakho-ke zibika ukwehliswa kwamajaqamba emilenze ngokuhlanganiswa kwe- amasokisi wokucindezela ithole ne-magnesium. I-Magnesium itholakala ku fafaza ifomu (esetshenziswa ngqo kwimisipha yethole) noma kwifomu lethebulethi (futhi ku- inhlanganisela ne-calcium).
I-Magnesium ingasiza imisipha yakho eshubile yehlise umoya. Ukusetshenziswa kwamasokisi okucindezelwa kusiza ukugcina ukusakazeka kuphakama - futhi ngaleyo ndlela kwandisa ijubane lokulungisa emisipheni ebuhlungu neqinisayo.
Izinyathelo ezilula ongazenza ukwandisa ukujikeleza kwegazi yilezi:
Ukusetshenziswa kwansuku zonke kwe- amasokisi wokucindezela ithole (isebenza kahle uma unenkani)
Ukusetshenziswa kwansuku zonke kwe- Amasokisi Okucindezelwa KwePlantar Fascitt (uma uhlushwa yizinhlungu zonyawo)
Ukuzivocavoca nsuku zonke (bona ividiyo ngezansi)
Ukwelashwa Kwamajaqamba Emilenze
Kunezindlela eziningana zokwelashwa eziphumelelayo zezinhlungu zemilenze. Phakathi kwezinye izinto, ukusebenza kwemisipha nokubhucungwa kungaba nomphumela wokukhululeka - futhi kungasiza ukukhulula imisipha eshubile. Ngezinkinga eziningi zesikhathi eside nezinkimbinkimbi, kunjalo Shockwave Ukwelashwa ube yisixazululo esifanele. Le yindlela yokwelashwa yesimanjemanje enomphumela obhalwe kahle ngokumelene nezikrufu zomlenze. Ukwelashwa kuvame ukuhlanganiswa nokuhlanganiswa ngokuhlanganyela kwezinqulu nasemhlane uma kutholakala ukungasebenzi kahle nakwezinye - futhi kungasolwa ukuthi kungenzeka kube nokucasuka kwemizwa ngemuva okunomthelela ezinkingeni emilenzeni nasezinyaweni.
Ngabe ukhathazwa yimikhaza yomlenze?
Siyajabula ukukusiza ngokuhlola nokwelashwa komunye wemitholampilo yethu esebenzisana nayo.
Ukuzivocavoca nokuQeqesha ngokumelene neLegg Cramps
Ukuzivocavoca okusiza ukuqinisa imilenze, amaqakala nezinyawo kungasiza ekwenzeni ngcono ukujikeleza kwegazi emilenzeni engezansi. Kungakusiza nokuthi uthole imisipha enwebeka futhi eguquguqukayo. Ukuzivocavoca ekhaya ngokwezifiso kungabhalwa udokotela wakho wezitho zomzimba, udokotela wezinhlungu noma abanye ochwepheshe bezempilo abafanele.
Kuvidiyo engezansi ungabona uhlelo lokuzivocavoca esiluncomayo ngamajaqamba emilenze. Siyazi ukuthi lolu hlelo lungabizwa ngokunye, kepha iqiniso lokuthi liyasiza ekuvikeleni ubuhlungu eqakaleni nalo liyabonakala njengebhonasi. Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi esigabeni sokuphawula ngezansi kwale ndatshana noma esiteshini sethu se-Youtube uma unemibuzo ozizwa singakusiza ngayo.
I-VIDEO: Ukuzivocavoca okuyi-5 ngokumelene nobuhlungu ezinyaweni
1. USluka et al, 2016. I-Neurobiology ye-fibromyalgia nobuhlungu obungapheli obusakazekile. I-Neuroscience Volume 338, 3 Disemba 2016, Amakhasi 114-129.
2.Bordoni et al, 2020. Ama-Muscle Cramps. Kushicilelwe. I-Treasure Island (FL): Ukushicilelwa kwe-StatPearls; 2020 Januwari-.
https://www.vondt.net/wp-content/uploads/vondt-i-leggen.jpg 349 700 olimalayo https://www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png olimalayo2021-01-11 19:51:182021-01-11 19:51:18I-Fibromyalgia ne-Leg Cramps
I-Fibromyalgia ne-Plantar Fascitis I-WOMAC (Inhlolovo Yokuhlola Ukuzihlola I-Osteoarthritis ye-Hip and Knee Osteoarthritis)